ᐈ Mee A Brawler: Mepụta nke gị Brawler Site na 0 ❤️ GOLUEGO.COM
Mee a Brawler bụ ngagharị nke na-eto na obodo nke Brawl Stars nwa oge.
Na, ọ bụ ezie na echiche ahụ dị mfe, dị ka aha ahụ na-egosi, o doro anya na ọ ga-eme egwuregwu ahụ nke Supercell mepụtara ka ọ bụrụ ihe ọhụụ na ike dị egwu, ebe ọ bụ na egwuregwu ọ bụla ga-adị iche kpamkpam mgbe juputara n'ihe ịtụnanya.
Gịnị na-ewu a Brawler?
Dị ka aha ya na-egosi, “Wulite a Brawler"Na-ezo aka n'eziokwu ahụ bụ na anyị onwe anyị nwere ohere iwulite, ma ọ bụ karịa," ịmepụta "nke anyị brawler, na-enye ya ọdịdị anyị chọrọ, na ọnụ ọgụgụ anyị nwetara n’ụzọ kasị kwekọọ n’usoro egwuregwu anyị.
Can nwere ike iche? A brawler na ọdịdị nke anyị, ma ọ bụ ọdịdị nke ụfọdụ njirimara ihe atụ sitere na ọdịbendị a ma ama, dị ka Batman, Spiderman, Goku ma ọ bụ ọbụna Darth Vader. Ohere ya agaghị agwụ agwụ!
Ọfọn ugbu a ọ nwere ike ịbụ eziokwu, n'ihi na n'ime akaụntụ gọọmentị nke Brawl Stars, na Twitter, ha malitere ndebiri nke ị nwere ike itinye ozi niile gbasara nke gị brawler. Naanị ị ga-ejupụta ndebiri na tweet ya site na ịdebanye na akaụntụ gọọmentị nke Brawl Stars.
Ike dị n'aka gị. 🙌
Gaa mkpụrụ osisi ma mepụta nke gị Brawler! Mmmmmmmmmmmm pic.twitter.com/HCd427JSWU
- Brawl Stars (@IGIHE) April 19, 2021
N'oge ọ bụghị nke gọọmentị, mana ikekwe, n'ọdịnihu dị nso, họrọ ụfọdụ ndị kachasị mma brawlers nke ndi obodo kere, ma tinye ha na egwuregwu.
Ebee ka echiche ahụ wuo a Brawler?
Anyị ji n'aka na gị onwe gị echetụla echiche maka imepụta nke gị brawler, dị ike ma ọ bụ dị ngwa karịa onye ọ bụla, nwere anya pụrụ iche nke ga - eme gị anyaụfụ nke ndị enyi gị niile. Ichebarala ya echiche n’ezie?
Ọfọn, ọ bụghị naanị gị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na egwuregwu ahụ malitere ịbụ onye a ma ama, ọtụtụ ndị otu obodo kwurula ihe nhọrọ a ga-adị na egwuregwu ahụ.
Na mgbakwunye, nke a na -eme nke ọma Ha na-enyere otutu aka nri a mmegharị taa nwere ụdị mgbawa na Twitter, ebe hashtag #onyinyebrawler, ka ndị mmepe nke Supercell wee hụ ihe anyị chọrọ.
Eziokwu bụ na, ruo ugbu a, enweghị nkwupụta gọọmentị nke na-enye anyị olileanya na mgbakwunye na ndị otu egwuregwu na Twitter, mana ugbu a Ryan bụ onye isi obodo, ọ nwere ike ịbụ akwa mmiri ka anyị wee hụ nhọrọ a na-egwuregwu n'oge na-adịghị anya.
Ka o sina dị, anyị nwere ike ichere naanị maka ndị mmepe ka ha tinye ngalaba iji wuo nke anyị brawler ma gbasaa ohere nke egwuregwu ahụ.
Jacky na 1 nkeji: Curiosities nke Jacky si Brawl Stars